Mpanamboatra latabatra sy orinasa tsara indrindra | Media
Ao amin'ny MEDO, ny latabatra foana no kintana manjelanjelatra. Io no mpiara-miasa indrindra amin'ny sofera MEDO. Ny mpividy rehetra dia maniry izany satria mahasoa sy mora vidy. Ny latabatra dia manampy toerana fanampiny ho an'ny anao. Izy io koa dia mitondra fahatsapana fomba amin'ny sofa. Mety ho entana na fanomezana fampiroboroboana tonga lafatra koa izany amin'ny vanim-potoana fivarotana.
Ny latabatra no fiheverana voalohany ny fanaka ao anaty trano. ny latabatra dia azo ampiana amin'ny toerana rehetra ao an-trano ary azo ovaina tsy miova.
Ireo latabatra koa dia manambatra ny famolavolana sy ny fampiasana milay. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny milina mandroso sy ny fitaovana avo lenta dia azonao antoka ny momba ny kalitaon'ny latabatra.
Latabatra kafe an-tampon'ny marbra ankehitriny
Izy io dia mandray ny marbra Italiana ho toy ny takelaka vita amin'ny takelaka sy vy vita amin'ny fonosana vita amin'ny hoditra.
Ny latabatra kafe marbra dia malaza eny an-tsena noho ny endriny voajanahary, mahatohitra hafanana ary mahatohitra fihantsiana.
Izy io dia somary marobe ihany koa amin'ny famolavolana anatiny, safidy tonga lafatra amin'ny toerana samihafa.
Latabatra fandraisam-bahiny efitra latabatra latabatra boribory boribory boribory latina
Ny latabatra kafe dia mandray ny famolavolana tongony metaly mafy, izay mahazaka gravity marobe avy amin'ny habakabaka ivelany.
Ny tampon'ny vato lafo vidy dia fitaovana vaovao tsara sy mihamafy. Ny sisin'ny tampony dia vy metaly mahafinaritra manorona sy miaro ny vato.
Latabatra vita amin'ny hoditra saddle italianina maoderina
Tapitra ambony, azo alaina amin'ireto marbra farany vita ireto, miaraka amin'ny famaranana lacquer malalaka tongony karbonina. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title= & oldid = 24250579 ''
Latabatra ivon-toerana minimalista miaraka amin'ny hoditra milomano
Underpanel ao amin'ny MDF tantely tantely miaraka amina veneer lavenona mifoka ary fonosina amin'ny lasely soavaly nafarana.
Tongotra amin'ny vy, vita vita amin'ny nickel volamena, ary glide miaro.
Latabatra fisakafoana marbra kely indrindra
Ny rindrin'ny latabatra dia vita amin'ny vy ary fonosina amin'ny lasely plastika preminium miaraka amina tongotra vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Misy fitaovana birao isan-karazany: marbra manetroka, loko marevaka amin'ny lokony tsy misy rano. Ny firafitra feno sy ny famolavolana fampiasa dia mamorona fomba milamina.
Latabatra fisakafoana efamira ministra
Amin'ny latabatra vita amin'ny marbra na hazo matanjaka haingoina ambony latabatra miolaka mahitsizoro, ny latabatra fisakafoana dia azo lazaina ho mpiorina voalohany amin'ny habaka an-trano, izay afaka mamaly ny filan'ny mifanitsy amin'ny fanaka samihafa.
Mampiavaka azy ny tongotra vy mitafy vy sy vy mainty. Ny takelaka vato dia entanin'ny lanitra feno kintana amin'ny alina fahavaratra: izy io dia vita amin'ny karazana marbra avo lenta sy mateza marobe avo lenta, mamorona fangaro miavaka amin'ny marbra lehibe sy maripana bitika, izay afaka maneho avana -ny loko.
Latabatra fisakafoana minimalista
Ny latabatra vita amin'ny marbra na hazo matanjaka voaravaka ambony latabatra miolaka mahitsizoro, mampiasa vato avo sy hazo ambonimbony, ny latabatra fisakafoanana dia azo lazaina ho mpiorina voalohany amin'ny habaka an-trano, izay afaka mamaly ny filan'ny fampifanarahana amin'ny fanaka samihafa.
MEDO Minimalism Style furnitures kafe latabatra fanaka
Izahay dia nanamboatra latabatra kafe misy kalitao ary nanamboatra rafitra QC mahomby hijerena ny lafiny tsirairay amin'ny fanaka. Ny traikefa sy ny fizotrantsika dia ahafahanay manome modely anaty entana sy vahaolana amin'ny latabatra kafe misy vidiny mirary.
Azonao atao ny manome fahafaham-po ny tsiro famolavolana maro amin'ny alàlan'ireo latabatra kafe ambongadiny tsy mitsaha-mitombo.
Ny latabatra marbra lafiny misy marbra fotsy voajanahary. Izy io dia manambatra ny singa marbra voajanahary sy lavenona amerikana tsara hazo. Izy io dia iray amin'ireo latabatra kafe an-tampon'ny marbra mivarotra mafana. Matetika ny mpanjifanay dia mampiasa azy io ho toy ny latabatra eo anilan'ny seza izay mora ampiasaina amin'ny endrika sofa maro isan-karazany.
Ireo latabatra kafe boribory kely izay manana endrika tsy manam-paharoa. Misongadina eo amin'ny tsena ny famolavolana ny firafiny sy ny fampifangaroana fitaovana sy loko isan-karazany. mitondra vokany mampitambatra ny habakao izy io.
Ny latabatra amin'ny lafiny dia latabatra kely toradroa izay manavaka ny tenany amin'ny sisiny volamena sy ny tongony. Ny latabatra dia eo amin'ny vato mifangaro mainty sy volamena mifangaro, miaraka amin'ny tongotra vy volamena, ny endrika dia manolotra rivo-piainana maoderina. Izy io dia miovaova amin'ny endriny maro
Ireo latabatra kafe maoderina.
Ny ampahany lehibe amin'ny latabatra kafe dia ao amin'ny Veneered MDF ampahany manampy fomba bebe kokoa. Ny fotony dia anaty vy mahery karbaona ka mety ho matanjaka be ary miaraka amin'izay koa.
Latabatra fisakafoana Minimalism an'ny MEDO
Mila latabatra fisakafoanana manokana ve ianao? Andao isika ho loharanon'ny latabatra mahazatra izay mifanaraka amin'ny vidinao. Miaraka amin'ny fanoloran-tena hamorona latabatra fisakafoanana matanjaka sy lamaody, ny ekipa mpamolavola antsika dia manavao tsy tapaka ny volavolainay mifanaraka amin'ny takian'ny tsena farany farany.
Ny laharan'ny latabatra fisakafoana marbra, latabatra fisakafoana miharo ary latabatra fisakafoana boribory no mpanamboatra latabatra fisakafoananay.
Ireo latabatra fisakafoanana misy seza ho an'ny olona 6 ka hatramin'ny 8. Izy io dia latabatra fisakafoanana minimalist mahazatra miaraka amin'ny tampony sy ny faladiany. Ny takelaka dia mety ho marbra voajanahary na MDF miaraka amina famaranana hazo terebinta. Raha ny tongony kosa voasarona varahina fonosina amin'ny lasely.
Manolotra habe 3 izahay amin'ny fangatahana habaka samihafa. Safidy manokana azo alaina ihany koa amin'ny baiko betsaka.
Ny latabatra fisakafoana boribory dia misy tongony metaly sy hazo sosona roa sosona. Ny habe, ny fitaovana ary ny loko dia azo namboarina hamaly ny filàna samihafa.
Latabatra fisakafoanana avo lenta
Ny endriny dia malama sy kanto. Izy io dia ekena ho endrika endrika faran'izay minimalista izay maneho fomba fiaina vaovao.
Tapa-kazo lehibe vita amin'ny seramika matanjaka sy manify mipetraka amin'ny tongotra vy mandehandeha nefa matanjaka. Tsy misy haingo hafa, misongadina ao anaty ala latabatra fisakafoana eny an-tsena izy io. Manampy tanteraka amin'ny endriny anatiny maro samihafa izy io.
Latabatra fanaka maoderina
Latabatra afovoany 1200 * 800 * 325mm 600 * 600 * 445 mm
ara-nofo Marbra artifisialy, hoditra milomano milomano
Leg fihinanana Tongotra vy + hoditra milomano
Latabatra afovoany Ø1200 * 390mm Ø800 * 460mm
ara-nofo Vy vy vy, marbra voajanahary volondavenona pizza
Leg fihinanana Tongotra vy
Latabatra afovoany 1000 * 1000 * 350mm 760 * 760 * 450 mm
ara-nofo Hoditra saddle Premium ， Black Steel, Oak
Latabatra afovoany 1300 * 780 * 400mm
ara-nofo Vovoka mifoka, 304 titanium vy tsy misy tadiny
Latabatra fisakafoana fanaka maoderina
Latabatra fisakafoana Ø130 * 750 mm Ø150 * 750mm
ara-nofo Walnut / Marbra voajanahary nafarana
Latabatra fisakafoana 1630 * 800 * 760 mm
Latabatra fisakafoana Ø1200 * 760 mm
ara-nofo Steel, Hodi-koditra premium, izy io dia Walnunt Veneer
Latabatra fisakafoana 1790 * 1100 * 745mm
ara-nofo White Marble Top
Teo aloha: Seza